Thursday 10th June 2021 08:30:22 in Wararkii Maanta by Madaxa Wararka
Saaxiibkay iyo walaalkay Cabdikariim Axmed Mooge aad iyo aad ayaan u hanbalyeeynayaa uguna duceynayaa. Waa shakhsi qiimo badan leh. Horta kulanka uu ku arkay madaxweynaha maanta waa shax wanaagsan oo uu ciyaaray. Nin cod badan ku soo baxay oo maayarnimo rabaa maaha inuu colaadaysto madaxweynaha kursiga ku fadhiya, Ilaahay ha guuleeyee, Mayor kastoo yimaadana khasab bay ku tahay inuu xukuumadda la shaqeeyo. Mayoraddii aanu berigii mucaaridka ka soo saarnay kuligood waa kuwii xukuumadda la wada shaqeeyey ee idinkuna shiciboow taasi ku biyo caba. Guul iyo Gobanimo
Gabadh Soomaali Ah Oo Qaab Aad Loola Yaabay Loogu Dilay Magaalada Mombassa.